Maxaad ka taqaanaa Axmed Ducaale oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad Galmudug? – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaad ka taqaanaa Axmed Ducaale oo ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad Galmudug?
Musharax Axmed Ducaale Geelle Xuseen (Xaaf), ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee u taagan jegada madaxtinimada ee maamulka Galmudug.
30-ka bishan April, ayaa waxaa lagu wadaa in la doorto madaxweynaha Galmudug, oo ay u taagan yihiin tiro musharaxiin ah oo isu soo sharaxay xilkaasi.
Siyaasiga Axmed Ducaale Geelle, ayaa ku dhashay Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, 8-dii bishii July sanadkii 1949-kii, iyadoo Dugsiga Hoose/Dhexe uu kusoo qaatay magaaladaasi, intii u dhaxeysay 1958-1965-kii. Sidoo kale Qur’aanka Kariimka ayuu ku xifdiyay isla magaaladaasi.
Mudadii burburka, ayuu la soo shaqeeyay qaar ka mid ah Hay’adaha Qaramada Midoobe sida, WFP, Save Children, FAO iyo ACRC. Wuxuu sidoo kale uu la soo shaqeeyay Hay’adaha DONE iyo ADCO Groups.
Marka laga hadlayo waxqabadka Xaaf, ayaa waxaa la’ogyahay in ceel biyeedyo fara-badan uu ka hirgeliyay magaalooyin ku kala yaala Gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug, waxaana laga xusi karaa Gaalkacyo 4 ceel, Galdogob 2 ceel, Dagaari 1 ceel, Galinsoor 1 ceel, Gowlalo 1 ceel, Galbarwaaqo 1 ceel, Celguula 1 ceel, Xinlabi 1 ceel, Dhuure 1 ceel, Qodaxtoole 1 ceel, Qodqod 1 ceel, Yamaarugleey 1 ceel, Matabaan 1 ceel, Beerxaani 1 ceel, Buurweyn 1 ceel, Dhabad 1 ceel iyo Caabudwaaq 1 ceel.
Iskusoo wada-duuboo Xaaf, ayaa rumeysan in wadada saxda ahi uu ku hogaamin karo bulshada ku dhaqan Gobolada Galgaduud & Mudug, haddii ay doortan Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug